Rava Bevacizumab (216974-75-3) HPLC≥98% | AASraw
/ Products / MaR & D Reagents / Bevacizumab (216974-75-3)
Rating: SKU: 216974-75-3. Category: MaR & D Reagents
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukurongeka kweBevacizumab (CAS 216974-75-3), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Bevacizumab powder inorondedzerwa se "monoclonal antibody" uye "anti-angiogenesis" drug.Bevacizumab inopihwa kuburikidza nekupinzwa mukati mutsinga (intravenous, IV). Mushonga wekutanga unopihwa pamusoro pemaminitsi makumi mapfumbamwe. Iyo nguva yekumisikidzwa inogona kupfupiswa kusvika pamaminitsi makumi matatu kana ikashivirirwa zvakanaka…
Bevacizumab basic Characters
Molecular Formula: C6638H10160N1720O2108S44
Molecular Kurema: 302.41
Storage Temp: 2 - 8 ° C
Bevacizumab (216974-75-3) kushandiswa mu-steroids cycle
Bevacizumab (CAS 216974-75-3), inonzi Avastin uye Mvasi.
Bevacizumab inouya senzira yekugadzirisa zvishoma nezvishoma mumhepo. Bevacizumab inotungamirirwa nachiremba kana mukoti mune imwe hofisi yezvechiremba, nzvimbo yekuderedza, kana chipatara. Bevacizumab inowanzopiwa kamwe kamwe mavhiki e2 kana 3.
Inofanira kutora maminitsi e90 kuti iwe ugamuchire mukana wako wekutanga we bevacizumab. Chiremba kana mukoti achakutarisisa kuti aone kuti muviri wako unoita sei kuBevacizumab (216974-75-3). Kana usina matambudziko akakomba apo iwe unogamuchira mukana wako wekutanga webevacizumab, inowanzozotora 30 kumaminitsi e60 kuti iwe ugamuchire umwe neumwe wemirasi yako yakasara yemishonga.
Ijova yeBevacizumab inogona kukonzera kukanganisa kwakanyanya panguva yekudzivirira kwemishonga. Kana ukaona chimwe chezviratidzo zvinotevera, udza chiremba wako pakarepo: kunetseka kufema kana kupfupika kwemhepo, chills, shaking, sweating, headaches, chestpain, chizuru, kunetseka, kuputika, kutema, kuputika, kana mikoko. Chiremba wako angave achida kunonoka kuderedza kuiswa kwako, kana kunonoka kana kumira kurapwa kwako kana iwe uchinzwa izvi kana zvimwe zvinetso.
Yambiro paBevacizumab (216974-75-3)
Bevacizumab inogona kuvhiringidza kurara kwemazuva ose uye kunokanganisa kubereka nezvibereko zvakawanda. Zvimwe zvikamu hazvisati zvadzoka zvakakwana, kana kuti zvidzoke zvishoma nezvishoma zvinotevera kuitika kwechirwere.
MaMonoclonal antibodies mhando nyowani nyowani ye "yakanangwa" yekurapa kenza. Antibodies chikamu chemuviri immune. Kazhinji, muviri unogadzira antibodies mukupindura kune antigen (senge protein mune germ) inopinda mumuviri. Masoja ekudzivirira chirwere anonamatira kune antigen kuitira kuimaka kuti iparadzwe ne immune system. Murabhoritari, masayendisiti anoongorora mamwe maantigen pamusoro pecancer cells (target) kuona protein inofananidzwa neantigen. Zvino, vachishandisa mhuka nemapuroteni emunhu, vesaenzi vanoshanda kugadzira rakakosha antibody rinonamira kune yakanangwa antigen. Maantibodies anonamira kune anofananidza maantigen sekiyi inokiya kukiya. Iyi tekinoroji inobvumidza kurapwa kunongedza chaiwo maseru, zvichikonzera kushomeka kune hutano maseru. Monoclonal antibody therapy inogona kuitirwa chete kanzira umo maantigengen (nema antibodies akanangana) akaonekwa.
Bevacizumab (216974-75-3) inobata nekupindira nekuita kwei angiogenesis nekutsvaga nekudzivisa hutachiona hwevanhu hunopedzisira kuwedzera (VEGF). VEGF inonzi cytokine (purotini duku yakabudiswa nemasero ine zvikanganiso zvakananga pamabatiro emasero) iyo iyo inobatanidza nemagetsi ayo muchitokisi inotungamirira kune mutsva weropa maitiro kana kuti angiogenesis.
Nzira yekutenga Bevacizumab kubva kuAASraw